बूढानीलकण्ठ, बागबजार र सानेपामा हैजाका बिरामी
९ असार २०७९, बिहिबार ६:५९
काठमाडौं । तुलनात्मक रूपमा कम प्रदूषित क्षेत्र मानिएको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा समेत हैजाका बिरामी भेटिएपछि राजधानीबासीमा त्रास बढेको छ ।
बुधबारसम्म जम्मा पाँच व्यक्तिमा हैजा देखिएको छ । तीन दिनअघि दुई जनामा देखिएको यस रोगलाई लिएर आम व्यक्तिमा ‘अपवाद हो, अन्यत्र देखिन्न’ भन्ने मनोभाव काठमाडौंको दक्षिणी क्षेत्र सानेपामा पनि देखिएपछि सम्पूर्ण उपत्यका नै प्रभावित हुन सक्ने त्रास बढेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा बुधबार थप तीन जनामा हैजाको संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
काठमाडौंको टेकुस्थित इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार, दुई जनाको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा हैजा पुष्टि भएको र अर्का एक जनाको पाटन अस्पतालले आरडीटी परीक्षण गर्दा सोही रोग देखिएको हो ।
कपन र सानेपाका बासिन्दामा हैजा पुष्टि भएको महाशाखाका निर्देशक डा. चुमनलाल दासले बताए । ‘हामीले अनुसन्धानका लागि टोली खटाइसकेका छौं, टोलीले रोगको कारण पत्ता लगाउन दूषित पानी र खानालगायतको गुणस्तरको मापन गरिरहेको छ’, उनले भने– ‘थप हैजा फैलन नदिन सचेत गराउँदै छौं ।
बालबालिकालाई लगाउन २३ लाख मात्रा खोप नेपाल आइपुग्याे
आफूमाथि लगाएको आरोप सावित गर्न डा. गोविन्द केसीको चुनाैती
केयूकेएल र ट्याङ्करको पानीमा नै हैजाको जीवाणु, उमालेर मात्रै पिउन सुझाव
काठमाडौंमा १४ जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि, सचेत रहन सबैलाई आग्रह